ယခုစာမျက်နှာတွင်အမြတ်အစွန်းမယူသောအဖွဲ့အစည်း PixelHELPER မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိအချိန်ဇယားကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ PacelHELPER ကိုတည်ထောင်သူ Oliver Bienkowski ထံတွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တော်လှန်ရေးကိုစတင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရာနှင့်ချီသောသတင်းပလက်ဖောင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းများအကြောင်းကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။
အနုပညာသတင်းစာ Atelier မှဆောင်းပါး
အနုပညာမဂ္ဂဇင်း Atelier မှဆောင်းပါး
ဆော်ဒီအာရေဗျ Protest Tank သို့လက်နက်များမရှိပါ
ထိုင်းနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအတွက်တော်လှန်ရေးအပေါ် Arte ။ Arte သည် PixelHELPER ကိုတစ်နှစ်ခွဲကြာလိုက်ပါခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ King Rama ကိုဖြုတ်ချရန် PixelHELPER ဆောင်ရွက်ချက်များမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
ဝီကီလိခ်သည်ဂျူလီယန်အက်ဆန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အာဖရိက ospel ၀ ံဂေလိတရားတော်ကိုပြန်လည်ရေးသားသည်
RTL ကို PixelHELPER လှုပ်ရှားသူ Rolling Dog နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ နောက်ကျောရုံးထဲမှာငါတို့သူရဲကောင်း။
ဝီကီလိခ်နှင့်ဂျူလီယန်အဆန်း၏မိသားစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Royal Pardon လှုပ်ရှားမှုကိုမျှဝေကြသည်
Deutsche Welle ၏ဂျာမန်မှတ်တမ်းတွင် PixelHELPER ဂျာမန်တီဗီ
Bild.de PixelHELPER Protest အကြောင်းဗီဒီယိုလွှမ်းခြုံမှု
PixelHELPER အကြောင်းကို RTL သတင်းတီဗွီ
PixelHELPER သည်ထိုင်းဘုရင့်လက်ဖြင့်ရုပ်သေးရုပ်နှင့်ဆန့်ကျင်ကာ ACT4DEM (အက်ဥပဒေအတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ဒီမိုကရေစီ) မှဖင်လန်နိုင်ငံမှ Junya Yimprasert နှင့်အတူဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
German Hotel Sonnenbichl Garmisch တွင်ရုပ်ပုံနှင့် PixelHELPER
PixelHELPER ဟိုတယ် Sonnenbichl Garmisch Partenkirchen တွင် ACT4DEM (Demcracy for Act) ဖင်လန်နိုင်ငံမှ Junya Yimprasert နှင့်အတူတကွဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်
PixelHELPER သည် Garmisch Partenkirchen မြို့တော်ခန်းမတွင်ဆန္ဒပြသည်
မော်ရိုကိုသတင်းစာ Hespress က PixelHELPER အားမော်ရိုကိုအစိုးရ၏သံတမန်ရေးရာနှင်ထုတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Uyghuren မီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်းသတိရအောက်မေ့ပွဲ၏ဆောက်လုပ်ရေးသည်အစိုးရ၏အနုပညာကိုနားလည်ရန်အလွန်အမင်းကြီးပုံရသည်။
ဂျူလီယန်အဆန်းအတွက် Buckingham နန်းတော်သို့ဝီကီလိခ်နှင့်အတူစီမံကိန်း
မိုင်းရှင်းလင်းရေးအစားကျွန်ုပ်တို့၏သစ်တောပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးသတင်းစာဖြစ်သော Moroccan Hespress တွင်ဖြစ်သည်။
80 သတင်းစာများ + ဘီဘီစီယူကေ + အာရပ်သတင်းပို့သည်။ Haaretz, Israelသရေလအမျိုး
အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုနှင့် Bahlsen ရှိသမိုင်း၏အတုအယောင်များကိုဆန့်ကျင်သောအရေးယူမှု
Lübeck News: မြေထဲပင်လယ်အတွင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း
ဒီမိုကရေစီဘဝမှအမှားအယွင်းများကိုအရေးယူခြင်း / VDMO / PixelHELPER
Dresden Frauenkirche တွင် Jan Böhmermannနှင့်အလင်းအလင်း
Times of Malta သတင်းစာဆရာ Daphne Caruana Galizia အတွက်အလင်းရောင်ခန့်မှန်းချက်
IMP News သည်ကဒ်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူ Bellevue Castle ၌အလင်းရောင်စီမံချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်ခဲ့သည်။
A. Gomringer သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရောဂျက်ကိုသူ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်
Deutsche Welle Arabic: အစ္စလာမ့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုဆန့်ကျင်သောမာကာတာဖောင်ဒေးရှင်း၏အလင်းစီမံချက်
Spiegel Online: Charles Puigdemont ကိုလွှတ်ပေးရန်အတွက်ပေါ့ပါးသောပရောဂျက်များ
OVB Online - Bad Aibling ရှိ Federal Intelligence Service မှအလင်းရောင်စီမံချက်များ
Berliner Morgenpost: တူရကီတွင်ဒီမိုကရေစီနည်းမကျသောရွေးကောက်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ခြင်း
ntv: တူရကီမှအနီရောင်သတိပေးချက်ကိုတရားမ ၀ င်အသုံးပြုခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောအလင်းရောင်
Berliner Zeitung: ဆော်ဒီသရဖူအားဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခြင်း
Oury Jalloh ရဲ့ရဲစခန်းကိုအလင်းတန်း
Sleaze မဂ္ဂဇင်း - မြောက်ကိုရီးယားသံရုံးသို့အလင်းရောင်ခန့်မှန်းခြင်း
Tagesspiegel - တူရကီမှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပေါ့ပါးတဲ့စီမံချက်
လွတ်လပ်သောယူကေ - တူရကီသံရုံးအပေါ်အလင်းစီမံချက်
Sputnik:9/ 11 Bank သည်ဆော်ဒီအာရေဗျသံရုံးကိုထွန်းလင်းစေသည်
Deutsche Welle - ဆော်ဒီသံရုံးသို့အလင်းတန်းတင်ခြင်း
Farben Kreul: PixelHELPER မှ Oliver Bienkowski နှင့်ပတ်သက်သောအဆိုတော်ပုံတူ
franceinfo + afp: အလင်းရောင် projection Daesh
Hape Kerkeling သည် PixelHELPER ၏အလင်းစီမံချက်ကိုမျှဝေသည်
Daily Mirror: ဆော်ဒီသံရုံးရှိ Daesh Bank
Sputnik - တူရကီသံရုံးကိုအလင်းရောင်ဖြင့်ခန့်မှန်းသည်
Stern မှတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည်တူရကီသံရုံးအပေါ် Erdogan ၏ကဗျာကိုပရောဂျက်တင်သည်
Tagesspiegel, PixelHELPER အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအတွက်အိပ်ပျော်နေသောသေတ္တာများ
Neuss Grevenbroicher Zeitung မှအလင်းအလင်းရောင်
ဘာလင်နာ Morgenpost ။ ။ သေသည့်ညတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Helmut Schmidt ကို SPD ဌာနချုပ်သို့ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
ဘာလင်သည်အလင်းရောင်စီမံချက် Daesh Bank
ပထမဘဝ - ဒေါက်တာ Oetker အရသာမဲ့အရောင်းဆိုင်များ
Kai Thrun: livestream swarm help အကြောင်းကိုဘလော့ဂါ
Kurier Austria: အမေရိကန်သံရုံးမှအလင်းရောင်အလင်းတန်းများ
Märkische Allgemeine über PixelHELPER - ဒုက္ခသည်များ Nauen တွင်ကြိုဆိုသည်
NRW ယခု - အွန်လိုင်းမှကူညီသူများကိုစီမံပြီးကောင်းမွန်သောနေ့ရက်များပြီးပါစေ
APA: NSA သည်ဗီယင်နာရှိအိမ်အတွင်းရှိ UNO City
Spiegel အွန်လိုင်း - ECB သည်အရေးမကြီးပါ
PixelHELPER အိုလီဗာ Bienkowski က Marrakech မှာ TedX ဆွေးနွေးပါ
ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသတင်း: ပိုတက်စီယမ်ကိုဆားတိုက်စားခြင်း
Urbanshit ဒေါက်တာ Ing မှလက်နက်များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆန့်ကျင်သောအလင်းတန်းများ။ Oetker
PixelHELPER အကြောင်း 37 ° ZDF မှအစီရင်ခံပါ
ယခု - အမေရိကန်သံရုံးကိုအသံလွှင့်ရုံတင်မကအရှုပ်တော်ပုံကိုဆန့်ကျင်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်လား
TheVerge: NSA ကိုအလင်းဆန့်ကျင်ခြင်း
အပြင်ကိုထွက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သေပြပါ - ခေါင်းလောင်းအိတ်ထဲကနေ crowdfunding အထိ
Spiegel Online International - Kim Dotcom အတွက်အလင်းစီမံချက်
SPIEGEL တွင် PixelHELPER ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်
ရိုက်တာသတင်းဌာနက PixelHELPER ကိုသတင်းပို့သည်
Sueddeutsche, Feuilleton သည်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအတွက် mediahacking
Bismarck မျှော်စင်များပေါ်တွင် Bismarck ဖောင်ဒေးရှင်းမှအလင်းရောင်တပ်ဆင်ခြင်း
Stern ပာ Hypo Real Estate တွင်အလင်းတပ်ဆင်ခြင်း
Extratip, သက်တံ့ရောင်တံတား Kassel
ပြောင်းပြန်ရေးခွအပေါ် Deutsche Welle
Hypo အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် Augsburger Allgemeine
BW ရှိကျေးလက်ဒေသများအတွက် ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
PixelHELPER International ကိုတည်ထောင်သူသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်“ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်တော်လှန်ရေးကိုစတင်ပါ” attac ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကတည်းကသူသည်အရာရာကိုစတင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ၁၀ နှစ်ကြာပြီးနောက်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်လှုပ်ရှားသောအနုပညာရှင်စုဆောင်းမှုတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အာရုံစိုက်မှုမှာအနုပညာလွတ်လပ်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးဆန့်ကျင်ရေးစီမံကိန်းများဖြစ်သည်
attac: "သင်၏ကိုယ်ပိုင်တော်လှန်ရေးစတင်ပါ" ဆု
HNA Kassel: အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ခေါင်းတလား
Branderburg ဂိတ်သို့ Pariser Platz တွင်အလင်းထည့်သွင်းခြင်း
Frankfurter Rundschau - နိုင်ငံသားတွေအမှာစာတောင်းဆိုမှု
PacelHELPER တည်ထောင်သူအား attac မှချီးမြှင့်သည့်အခမ်းအနား
စာအုပ် entries တွေကို
အော့တို Kettmann: အရှုပ်တော်ပုံ၏ Limburg 2013 ခန္ဓာဗေဒ
အဲရစ်Mülling: Big Data နှင့်ဒီဂျစ်တယ်နားမထောင်ခြင်း
Monika Mühlpfordt - မှော်အတတ်ပညာ၏သားစဉ်မြေးဆက်အဖြစ်ဆောင်ပုဒ်
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Zorn ကျနော်တို့ခံစားခဲ့ကြရသည်အဘယ်အရာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ခဲ့တယ် အဘိုးအဘွား အဘို့ကောက်နေလက်ဖက်ရည် Ceylon အတွက် Bigwigs?
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိဘများ Auf တွင်း ဝါဂွမ်းလယ်ကွင်းကြိုးစားအားထုတ် Saxony အတွက်အိန္ဒိယနှင့်ဆင်းရဲသားများအတွက် ကြေးနီနှင့် coltan မိုင်း Dresden အနီးရုံဒါ အိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦးလျှင်ကွန်ဂို 30 လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ရှိသည်။
နှင့် ကိုကိုသီး နှင့် အဆိုပါ Palatinate အတွက်ကော်ဖီစိုက်ခင်း! အဆိုပါ Palatinate ၏သားစဉ်မြေးဆက်ကသူတို့ရှိ ကနျြးမာရေးပကျြစီး ထိုအစက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောအဘို့ အာဖရိကန်ကော်ပိုရေးရှင်း။ နှင့် ဆိုမာလီငါးဖမ်းသင်္ဘောအုပ်စုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြောက်ပင်လယ်ငါးဖမ်းကြကြောင်းဌာနကပါပြီ, ဒါကြောင့်ယခုအများအပြားရှိခဲ့ Ostfriesen ပင်လယ်ဓားပြများ ဖြစ်လိမ့်မည်။
အားလုံးနီးပါး သူတို့သေနတ်နဲ့ပစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်သူတို့၏သည် စစ်တုရင်ကိုအပိုင်းပိုင်းနှင့်စန္ဒရားခလုတ်များကို, ယခုတွင်သင်သည်သူတို့၏ Jeep အတူတက် လာ. ထိုပင် Safari ကလုပ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုကြည့် အဆိုပါဘာသာစကား Bavarian သစ်တောထဲမှာနောက်ဆုံးဆင် ပေါ်မှာ။ ဒါကခက်ခဲပါတယ်။
Und ထို့နောက် Herero အဘိဓါန်ဂျာမဏီအဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူဤရွေ့ကား, အဆိုပါ Schwaben ဆန့်ကျင်ကျူးလွန်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု, ဒါကဟုတ်ကဲ့လည်းပုံရသည်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာမိမိတို့အဝတ်ကိုကယ်ခေါက်ကြဘူးတစ်ခုခု, 100 နှစ်နေတုန်းပဲနှိပ်စက်တာရာ၏တစ်ဦးအဖြစ်လျင်မြန်စွာပြန်လည်နာလန်ထူမထားဘူး။
ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဒူးတက်ရပ်နေနေကြသည် ကြမ်းတမ်းဓာတုပစ္စည်းသငျသညျထိုကြောင့်7ယူရို Jean များအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက် Buy နိုင်။
ဘယ်နှစ်ယောက်ကနျြောတို့အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့မိန်းကလေး Bielefeld အတွက်စိန်မိုင်းဒါကြောင့် ဆီယာရာလီယွန်အတွက် Bigwigs သီဆိုနိုင်တယ် "စိန်တွေကမိန်းကလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပဲ”, အခုတောင်မှမြေထဲပင်လယ်ဖြတ်ပြီးလာဆဲချင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gyms တှငျနထေိုငျ.
ဒါကြောင့်အဘယျသို့ရသေးအရာအားလုံးအဖြစ်။ ကျနော်တို့နေဆဲသူတို့အဘို့အဘယ်အရာကိုမျှအဘယ်သို့ပြုသင့်သနည်း တစ်ချိန်ချိန်လည်းပိတ်နေသည်တစ်ချိန်ချိန်ကျွန်တော်သိပ်မရှိတော့နိုငျပါသညျ! တစ်ချိန်ချိန်, မဖြောင့်သေးပိုပြီး!
ကျွန်တော်တို့၏ နှလုံးဝေး aber ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနောက်ဆုံးတော့များမှာဉာဏ်အလင်းပွင့်၏စိတ်၌လူမှုရေး Self- အာမခံချက်တစ်ပုံစံအဖြစ် .t ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်အနုပညာဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြည်နယ်အတွင်း၌ပဉ္စမမြောက်အာဏာအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်အနုပညာသည်တကယ့်အဖြစ်မှန်နှင့်မကိုက်ညီသောမှန်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်တီထွင်ခြင်း၊ တိုက်ဖျက်ခြင်းနှင့်လူတို့အားပုံမှန်ဘဝသို့တဖြည်းဖြည်းပြန်သွားနိုင်သည့်တူနှင့်တူသည်
pixels ကိုကူညီမှာ Oliver Bienkowski အဘိဓါန် Moroccan လမ်းပေါ်မှာခွေး ET ၏တည်ထောင်သူ
အမျိုးမျိုးသော PrixelHELPER လုပ်ဆောင်ချက်များ၏တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့အကျဉ်းချုပ်
PixelHELPER ၏အောင်မြင်မှုများ ဖေဖော်ဝါရီလ 17th, 2021အိုလီဗာ Bienkowski